'निजी सवारी जनताको पहुँचभन्दा टाढा भयो'
नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहाल।	| तस्वीर:रिवाज राई
नेपालमा सवारी प्रयोगकर्ताहरुसँगै लगानीकर्ताहरु पनि दिनदिनै बढ्दै छन्। अहिले अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा खबौं रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ। वार्षिक झन्डै साँढे चार लाखको हाराहारीमा सवारी साधन भित्रिने गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने झन्डै ३० लाख सवारी साधन देशभर दर्ता भइसकेका छन्।
तैपनि नेपालमा गाडीमा कर अध्याधिक भएकै कारण मध्यमस्तरका नागरिककाे पहुँचभन्दा सवारी टाढा भएको छ। पछिल्लो समय विश्वभर विद्युतीय सवारीको बिक्री बढ्दो छ। नेपालमा त्यसको प्रभाव पर्दै गए पनि महँगो भएका कारण सवैको चासोमा पर्न सकेको छैन।
सवै नागरिकलाई यसतर्फ आकर्षित गर्न ठुला चाडपर्वको मुखमा अटो शोमा आयाेजना हुँदै आएका छन्। जहाँ करोडौको कारोबार हुने गरेको छ भने हजारौले अवलोकन गर्छन। पछिल्लो समय सवारी आयातकर्ता र प्रयोगकर्ताहरुको संगमस्थल नाडा अटो शो बन्दै गएको छ। प्रस्तुत छ, नेपालमा अटोमोबाइल्स क्षेत्रका समस्या तथा नाडा अटो शोमा केन्द्रीत रहेर नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहालसँग काठमाडौं प्रेसका लागि केदार दाहाल र भोजराज भण्डारीले गरेको कुराकानी :
पछिल्लो समय सवारी साधनको बिक्री वितरण कस्तो छ?
पछिल्लो समय नेपाली अटो बजार सुस्त गतिमा छ। बिक्री वितरण बढ्न सकेको छैन। बजार मन्द र सुस्त रहेको छ। यसमा विभिन्न कारणहरु रहेको छन्। बैंकको सवारी कर्जादेखि राष्ट्र बैंकले समय समयमा परिवर्तन गर्ने नीतिसम्मले असर पारेको छ।
सवारी साधनको बिक्रीमा गरिने विभिन्न हल्ला तथा प्रचारले समेत असर पार्ने गरेको छ। पहिले बैंककमा तरलता अभाव हुदाँ केही समस्या रहेको थियो। तर, तरलता अभाव नहुलदाँ पनि सवारीको बजार बढ्न सकेको छैन। बिक्री विगतका वर्षभन्दा घट्दो ट्रेन्डमा रहेको छ।
नेपालमा गाडी किन्ने उपभोक्तानै सकिए कि किन्न नसक्ने बनाइयो?
यसमा धेरै कुराले असर पारेको छ। सरकारले करमाथि कर थुपार्ने काम गरेको छ। जसका कारण मध्यमस्तरका जनताको पहुँचबाट सवारीलाई टाढा पुर्‍याइएको छ। नेपालमा राज्यको बागडोर सम्हाल्नेहरुले जनताको पँहुचभन्दा धेरै टाढा सवारीलाई पुर्‍याएका छन्। गाडी मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रको बजार पनि सुस्त रहेको छ।
त्यसकारण पनि सवारीमा असर परेको हो। अर्थतन्त्र चलायमान नभएका कारण पनि सवारी बिक्री घटेको छ। नेपालमा मात्र नभएर भारत, चीनमा पनि सवारी बिक्री पछिल्लो वर्षहरुमा घटेको छ। त्यसको असर नेपालमा पनि परेको हुनसक्छ। व्यापार भन्ने कुरा हल्लामा निर्भर हुन्छ। सरकारले सवारीलाई शत्रुकै रुपमा लिएको छ। व्यापार घाटा खतम भो, बर्वाद भो भन्नेलगायत विषय लगातार आइरहँदा पनि केही असरहरु परेको हुनसक्छ।
देशभर सडक सञ्जाल विस्तार भइरहेका वेला अझै सवारी बिक्री उच्च हुनुपर्ने होइन?
देशैभर सडक विस्तार भएपनि कस्तो सडक बन्दै गएको छ? देभभर निर्माण भएका सडक सवारी चलाउन योग्य छन्? कुनै पनि सडक सवारी चलाउन योग्यनै छैन। चिल्ला सडक भए भने मात्रै हो सवारी किन्न मन लाग्ने, चलाउन मन लाग्ने। तर, पहाडी भागमा बनेका कुनै पनि सडक सवारी चलाउन योग्यनै छैनन्। पहिलो कुरा त्यस्ता सडकमा व्यापारिक प्रयोजनका सवारी जाने गर्दछन्। साना सवारी जान सक्दैनन्।
साना सवारीको बिक्री कम हुँदा कमर्सियल सवारीको बिक्री बढेको हो?
अहिले ठुला सवारीको पनि बिक्री बढ्न सकेको छैन। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार बनेपछि कर्मर्सियल भेकलको बिक्री बढ्नु पर्ने हो तर, बढ्न सकेको छैन। अहिले सवारी साधनहरुको बिक्री झण्डै ३० प्रतिशतनै कम भएको छ।